Xfce ရှိ Windows AeroSnap အကျိုးသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ် Compiz Grid Linux မှ
Xfce ရှိ Windows AeroSnap သို့မဟုတ် Compiz Grid အကျိုးသက်ရောက်မှု
မကြာသေးမီကအသုံးပြုသူတစ် ဦး ကမေးလ်ဖြင့်မေးသည် Xfce ကျနော်တို့အကျိုးသက်ရောက်မှုဆင်တူတစ်ခုခုရှိနိုင်ဘူး လေပြေ de Windows ကိုဒါမှမဟုတ် Compiz Grid, နှင့်အတူကျနော်တို့ရိုးရှင်းစွာမျက်နှာပြင်၏အစွန်းမှဆွဲခြင်းအားဖြင့်မျက်နှာပြင်အလယ်၌ပြတင်းပေါက်ညှိ။
ဒါဟာထဲမှာထွက်လှည့် Archlinux AUR များအတွက် patch ကိုရှိပါတယ် Xfwm ဒါကိုကျွန်တော်တို့အတိအကျလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုတယ် (နှင့် p% $ # mother မှအလုပ်လုပ်သည်) console တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်အရာရာအားလုံးပြီးဆုံးသွားသောအခါ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြလိမ့်မည် xwfm4- ကြွေပြားခင်းခြင်း နှင့်ပိပက္ခ xwwmသို့သော်ထိုအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်မဝင်စားပါ။ သင် install လုပ်ပြီးပါက session ကိုပိတ်ပြီးပြန်ဝင်ပါကအောက်ပါရလဒ်ကိုရလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောပါသည်။
ကျနော်တို့ညာဘက်ကိုဆွဲယူလျှင်အတူတူပင်, ဘယ်ဘက်နှင့် fuck ဆိုတဲ့အထင်ကြီး (ငါ expletive ခံစားရတယ်, ငါစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်), ဒါကြောင့်လည်းတက်နှင့်တက် does
Edit: အကယ်၍ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွင်ထိုနာမည်မရှိလျှင် Windows နှင့် Compiz မှငါ့ကိုအသိပေးပါ။ 😛
ငါ Xfce <3 ချစ်ကြတယ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အကြံပြုပါသည် » Xfce ရှိ Windows AeroSnap သို့မဟုတ် Compiz Grid အကျိုးသက်ရောက်မှု
သင်ပြောသည့်အတိုင်း ၄.၁၀ တွင်၎င်းကိုပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် windows ၏ထိုအင်္ဂါရပ်ကိုစိတ် ၀ င်စားသောကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ခဲ့သည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ xfce ကိုရှာမတွေ့မှီတိုင်အောင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်အလျားလိုက်အလျားလိုက်ကြည့်ရင်ကောင်းပါတယ်။ (ကျနော့်အမြင်အရ) ၀ င်းဒိုးတစ်ခုထောင့်သို့ဆွဲယူခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည် 4.10 ×2ဇယားကွက်အတွင်းထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ယခုအချိန်အထိမြင်နိုင်သောအရာမှာ2×2(သို့) 1 × 1 (အလျားလိုက်ပေါ်မူတည်။ ) သို့မဟုတ်ဒေါင်လိုက်), ဒါမှမဟုတ်တစ် ဦး hotkey နှင့်အတူလုပ်ပါ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်သည် desktop တစ်ခု၏ ၀ င်းဒိုးတစ်ခုထက်ပိုပြီးအသုံးပြုသောသို့မဟုတ်ကျယ်ပြန့်ပြီးသို့မဟုတ်ကြီးမားသောမော်နီတာကြီးများရှိသည့် xfce အသုံးပြုသူများအတွက်၎င်းကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုသည်။
ပြီးတော့ gnome အဘို့? ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာဇယားကွက်
စိတ်ကူး ငါသည်သင်တို့အဘို့အ Compiz ကိုအသုံးပြုရန်ရှိသည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
CompizConfig ကို install လုပ်ရုံဖြင့် Window manager ကဏ္inတွင် Grid box ကို Check လုပ်ပြီးသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောသော့ကိုပေါင်းစပ်ပါ။
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ငါထားခဲ့ပါ ဒီ link ကို သူတို့ကတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ရှင်းပြတဲ့ဘလော့ဂ်ဆောင်းပါးတစ်ခုမှာ။
ဂရိတ် !!! Elav အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ Xfce မှဘာမျှမကျန်တော့ပါ။
ငါစိတ်လှုပ်ရှားနေတုန်းပဲ ငါ Xfce 4.10 in ထဲမှာပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ကဒီလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများပါဝင်သည်ရှိမရှိကြည့်ရှုရန် Xfce စာရင်းကိုငါရေးပြီးပြီ
အထုပ်ကို AUR တွင်သိမ်းထားသူမည်သူမဆိုယင်းသို့ပြုလုပ်ရန်အချိန်မရှိတော့ဟုထင်ရသည်
အရှက် ကြောင်းတကယ်အရေးမပါဘူးပေမယ့်။ အဆိုပါ patch ကိုလျှောက်ထားလွယ်ကူသော should ဖြစ်သင့်သည်
ကောင်းတယ် အင်းကျွန်တော်မှာ Arch မရှိဘူး၊ အဲဒါဟာ LMDE = S မဟုတ်ဘူး။ ... ငါတတ်နိုင်သလောက်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်၏ဆုတောင်းချက်များကို Xfce developer များမှနားညောင်းပြီးနောက် version အတွက်ပါ ၀ င်ပါက LMDE ၌ရရှိရန်သင်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းရမည်။
ဤသည်အလွန်အေးမြဆက်ဆက်အလွန်အသုံးဝင်သောအင်္ဂါရပ်, ဒါပေမယ့်သူကပြောတယ် Opensuse များအတွက် Arch ပြောင်းလဲပစ်ငါနှင့်ငါမပျော်ရွှင်🙁
ငါလူအကြောင်းမသိဘူး၊ မကြာသေးမီကငါ Chakra အတွက်အချိန်အနည်းငယ်ဖြုန်းဖို့စဉ်းစားထားသမျှအရာအားလုံးကိုကြိုးစားရှာဖွေရန်ဆန္ဒရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဒေါင်းလုပ် ချ၍ မရမည်ဆိုလျှင် Arch သို့ပြန်သွားလိမ့်မည်။
ငါဖန်တီးခဲ့တဲ့ Bluebird + Zukitwo ရောစပ်ထားတဲ့ ZukiBird
xfce အတွက်ပိုကောင်းတဲ့အရာကိုငါမတွေ့လို့ပါ။ စကားမစပ် Ubuntu အရင်းအမြစ်ကိုသုံးသလားဒါမှမဟုတ်ငါထင်သလား။
ဟုတ်တယ်၊ ငါ Ubuntu font ကိုသုံးတယ်။ ပထမဆုံး version ထွက်လာကတည်းက။ 😀
မင်းခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး post တစ်ခုရှိလား။ ငါသည်လည်းအလွန်အေးမြတွေ့ရှိခဲ့!
အကယ်၍ သင်သည် XFCE ခေါင်းစဉ်ကိုဆိုလိုသည်ဆိုလျှင်သင်ရှာဖွေနိုင်သည် ဒီမှာ.
Eddy Ernesto del Valle Pino ဟုသူကပြောသည်
Hehe .. ၀ င်းဒိုးတစ်ခုကို screen ၏ဘေးတစ်ဖက်သို့ဆွဲယူသောအခါ၎င်းသည်နောက် desktop သို့ရွှေ့ရန်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ငါရိုက်ကူးလျှောက်ထားသည့်အခါဒီနေဆဲငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်နည်း
Eddy Ernesto del Valle Pino အားပြန်ပြောပါ
ထိုအရာကို Xfce စာရင်းတွင်ဆွေးနွေးနေသည်။ တစ် ဦး က developer ငါ့ကိုမော်နီတာတစ် ဦး ထက်ပိုအသုံးပြုသောအခါဤပြaနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ကြောင်း, တူညီသောအရာကပြောကြားခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူလိုအပ်သည့်အတိုင်း၎င်းကို activate သို့မဟုတ် deactivate လုပ်ရန် option ကိုထည့်သွင်းရန်အကြံပြုခဲ့သည်။ အခြားသူတစ်စုံတစ် ဦး က၎င်းသည် milliseconds များအတွင်းအချိန်ကာလတစ်ခုဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်ဟုအကြံပြုသည်။ ၎င်းသည် window ကိုအစွန်းသို့ရောက်သောအခါ၎င်း function သည်ခဏမျှသက်ဝင်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းအရာအားလုံးသည်ယခုအချိန်တွင်ဆွေးနွေးနေကြသည်။
ကျွန်ုပ်တွင်၎င်းနှင့်အခြားစားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများသို့ပြတင်းပေါက်များကိုကျွန်ုပ်သွားနိုင်သည်။ အခြား desktop တစ်ခု၏ဘေးဘက်သို့အနည်းငယ်ထပ်ဆွဲရုံသာလိုသည်။ ၎င်းကိုအခြားမော်နီတာများသို့မည်သို့လွှဲပြောင်းမည်ကိုမသိပါ။
အသုံးပြုသူအချို့၏တောင်းဆိုမှုအရ "tiling" ကိစ္စသည်ကြာမြင့်စွာကတည်းကပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ စင်စစ်အားဖြင့် Xfce ဝီကီတွင် ၄.၁၀ ထည့်သွင်းရန်အင်္ဂါရပ်တစ်ခုအနေနှင့်ပေါ်လာသည်။ သို့သော် developer များသည်သတ်မှတ်ထားသောရက်စွဲများနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့် ၄.၁၂ အတွက်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ယခုနှစ်မတ်လတွင် (နောက်ထပ်နှောင့်နှေးမှုများရှိပါကမှ လွဲ၍) ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။
ကောင်းပြီ၊ ဟုတ်ကဲ့၊ ပြissueနာက developer များစာရင်းတွင်ရွေ့နေသည်။ ဘယ်လိုအဆုံးသတ်လဲကြည့်ရအောင်။ တခါတရံမှာ Xfce programmer တွေကအပြောင်းအလဲအသစ်တွေကိုသိပ်မကြိုက်ဘူး၊ အရာအားလုံးကသူတို့ကိုမလိုအပ်သောပုံရသည်။
အပြောင်းအလဲလို့ပြောတာကိုပြောင်းပါ၊ သူတို့ဘာမှမကြိုက်ဘူး။ ဥပမာအားဖြင့် developer များ၏မေးလ်စာရင်းတွင် Thunar တွင် tabs များထည့်သွင်းရန်ဖြစ်နိုင်ချေကိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီး Janis Pohlman နှင့်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်း၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပြwithနာများနှင့် ပတ်သက်၍ အဖြေမှာတညီတညွတ်တည်းအနှုတ်သဘောဆောင်သည်။
အမှန်တရားကတော့ developer တွေအကြောင်းဘယ်လိုစဉ်းစားရမယ်ဆိုတာတစ်ခါတလေကျွန်တော်မသိဘူး။ အခုသူတို့ Xfce ရဲ့အတွင်းပိုင်းဗိသုကာကိုအများကြီးပြောင်းလဲနေတယ် (xfconf, libxfceui4 အစားထိုး libxfcegui4, GIO, etc) အဖြစ်အမှီပြု။ သာ Gnome စာကြည့်တိုက်များနှင့် GTK အပေါ်တတ်နိုင်သမျှနည်းနည်း။ တကယ်တော့ ၄.၈ မှာအလုပ်ကို "တစ်ဝက်" ပြီးပြီးချင်း ၄.၁၀ မှာပြီးအောင်လုပ်ပါ။
ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်မှတ်ချက်ပေးတဲ့အခါပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုစိုက်တဲ့ developer တွေသိပ်မများဘူး၊ အရေးကြီးတဲ့လူတွေထွက်ခွာသွားတယ်၊ အနည်းငယ်ထပ်ထည့်လိုက်တယ်၊ Pohlman လိုအခြားသူတွေကသူတို့သတ်မှတ်ထားနိုင်တဲ့အချိန်ကိုကန့်သတ်ထားတဲ့“ တကယ့်” ကမ္ဘာမှာအလုပ်အကိုင်တွေရပြီ။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်ငါအဲဒီဆွေးနွေးမှုမှာပါဝင်ခဲ့တယ်။ သူတို့က Thunar ကိုပြန်မရေးရန်နှင့်ဆင်ခြေအောက်တွင် tabs များထပ်ထည့်ရန်မတောင်းဆိုပါက၎င်းသည်ရိုးရှင်းစွာဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ သူတို့မှာ developer များများစားစားမရှိတာကြောင့်သူတို့ကငါ့ကိုအသစ်အဆန်းတွေထပ်ထည့်ခွင့်မပြုတာဖြစ်နိုင်တယ်။
ရယ်စရာကောင်းသည်မှာ Xfce ကိုဖန်တီးသူ Oliver Fourdan သည်ဤအရာများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းမရှိပါ။ Janis Pohlman သည်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သကဲ့သို့ဝတ်ဆင်ရန်မ ၀ တ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မည်မျှထူးဆန်းသနည်း။
PS: ဒါဟာမင်းကိုလိမ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ blog ဟာ linux လောကမှာစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးထဲကတစ်ခုပါ။ Iberian ကျွန်းဆွယ်မှ (ငါသည်လည်းအမြဲတမ်းမင်္ဂလာပါဟုမမေ့ရန်) နှုတ်ခွန်းဆက်သပါသည်။
မင်းရဲ့မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါတို့ကိုအမှန်တရားချော့မော့စေတယ်။ မိသားစုတစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာနေလို့ကောင်းတယ်လို့ခံစားရလိမ့်မယ်။
XFCE & LXDE အသုံးပြုသူအုပ်စု
လူပေါင်း ၃၁၄,၃၆၃ ယောက်သည် ၂၀၁၂ တွင်ပရိုဂရမ်လေ့လာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်